Raysal Wasaaraha Yahuuda oo ganafka ku dhuftay Hadal kasoo yeeray Madaxweynaha Maraykanka. – SBC
Raysal Wasaaraha Yahuuda oo ganafka ku dhuftay Hadal kasoo yeeray Madaxweynaha Maraykanka.
Iyada oo la filayo in Raysal Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu uu aqalka cad ee Maraykanka uu kula kulmo Obama ayaa War laga soo saaray Natanyahu xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in aanay qaadanayn hadal kasoo yeeray Madaxweynaha Maraykanka Obama oo ku aadanaa in lagu saleeyo Dowlad ay Falstiin yeelato heshiiskii dhinaca xuduuda ee sanadii 1967.
Natanyahu waxaa uu sheegay in aanay gorgortan ka galayn xuduudahooda,iyadoona sida uu hadalka u dhigay aanay u muuqan maslaxad Dowlada ay Falastiin yeelato,lagana garab dhiso Iyaga.
Natanyahu waxaa uu kaloo xusay in aanay qaadanayn talo kasta oo loogu soo jeediyo in ay ka baxaan goobaha ay haatan ku sugan yihiin,iyagoona aanan haysan damaanad dhinaca Amaanka.
Obama iyo Natanyahu waxaa ay ku balan san yihiin Aqalka cad ee Maraykanka,iyagoona ka wada hadli doona xaalada haatan soo cusboonaaday ee Bariga dhexe,gaar ahaan aqoonsiga Dowlada ay Falastiinyiintu leeyihiin.
Isreal waxaa ay si xoog ah ku degentahay dhul ay si sharci dara ah ugu habsatay,iyadoona caalamka aanay ka dhicin Maamul si xoog ah maamul kale ugu gudba kadibna dhisme ka samaysta deegaanada maamulkaasi.
Falastiinyiitu waxaa ay wadaan Olole ay Qaramada Midoobay uga dalbanayaan in lagu aqoon sado Dowladooda,loogana kiciyo Yahuuda deegaanadooda ay xooga ku haystaan.